Iindaba zesiXhosa, 11 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 11 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 11/03/2019
Lininzi inani labafundi abangekafumani sikolo
Umbutho olwela umakulinganwe ngokwemfundo uthi isebe lezemfundo kweliphondo malize neqhinga elikhawulezileyo lokuba bazakuthiwani abafundi abangaphaya kwamawaka amane abangekafumani zindawo zokufunda kulonyaka. Eliqela lithi ayamkelekanga into yokuba ngelixesha enyakeni kube kusekho abafundi abangekawaboni amasango esikolo, sele kusisithuba senyanga ezimbini kodwa malunga namawaka amathathu anamakhulu asithoba abafundi kweliphondo bangekafundi. Lombutho uthi elisebe malenze ngokukhawuleza kuba ababafundi akunakulindeleka ukuba baleqe izifundo sele beshiywe zinyanga ezingaka zomsebenzi wesikolo. Ophuma kulombutho uRone’ McFarlane uthi kuko izinto ezibangela ukuba abafundi abadinga indawo zokufunda kuquka nokuba bebaninzi abantu abasuka kumanye amaphondo.Nangona kunjalo isebe lezemfundo lithi bakhona abantu abancedisana nababafundi ngezifundo ukuba bangashiye kakhulu logama kusazanywa indlela zokuba bangene ezikolweni.
Iya enkundleni indaba yomhlaba wase District six
Bazilungiselela idabi lasenkundleni kunye norhulumente abanye babahlali base Distrct Six kweli lekapa. Kwinyanga ephelileyo umbuso ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo uphendula kwisigunyaziso senkundla sokuba uze nendlela ekhawulezileyo yokuxazululaingxaki yomhlaba. Abahlali base District Six badibana eSalt River beyokubonisana ngomkhomba ndlela emva kwempendulo yenkundla. Inkundla iceliwe ukuba iyalele isebe lophuhliso lwamaphandle liyeke ukuba selulawulweni lalwamhlaba.Abahlali abafuni nokuyiva eyokuba basuswe kwindawo abahlala kuyo bathi abafuni kusuka kuba kukufutshane nedolophu kwaye intaba ilapha emva kwabo kanti nenqanawa bayazibona besemakhayeni wabo.
Ubekiwe umlinganiselo wokusetyenziswa kwamanzi
Isixeko seKapa sibeke umlinganiselo wezinga lesithathu lokusetyenziswa kwamanzi. Kungokunje abahlali bavumelekile ukuncenceshela iigadi zabo ngendlela eyonga amanzi. Isixeko sithi siyekelele noko kwimiqathango yaso nanjengoko izinga lamanzi kumadama eli phondo limi kumyinge wamashuni amahlanu anesithathu ekhulwini xa kuthelekiswa namashumi amabini anesine ekhulwini.
i-IFP ithi umbutho wayo ayingonobangela wemfazwe yango 1980
Inkokheli yeqela leIFP umnumzana aMangosuthu Gatsha Buthelezi uyazibhebhetha iingxelo zokuba iqela lakhe lacwangcisa ubundlobongela ngexesha lengcinezelo esithi iqela lakhe nalo lalilixhoba, Ethetha nabakwa-Eyewitness News uButhelezi uthi eli qela alinguye unobangela wemfazwe yangoo1980 noo1990 koko ukubuya kweANC kuqeqesho lobujoni eVietnam akuzange kusetyenziswe kwwabamhlophe koko kwajoliswa kwimibutho engeminye yabantu abantsundu. Uthi kwanyanzeleka ukuba amalungu eIFP azikhusele kuhlaselo olungenasiza6thu lweANC. Uthi intetha yokuba yena wayeyingqeqe yabamhlophe iphenjelelwa ngoofunzeweni beentatheli.
uCele ulicacisile elithi amapolisa azoqinisekisa ukhuseleko ngeemini zevoti
Umphathiswa wamapolisa kuzwelonke unjengele Bheki Cele uthi awasayi kuhleka amapolisa xeshikweni equbisana nabo baphazamisana nolonyulo. uCele ebethetha izolo kwindibano yekomiti yoxolo nokhuselo yeANC esithi amaqumrhu onyanzeliso-mthetho azakuqinisekisa ukuba amalungelo abavoti akhuselekile. Kulindeleke ukuba abemi beli lizwe baye kulonyulo ngomhla wesibhozo kwinyanga kaCanzibe.
Abezempilo bophula umthetho ngokugqithisa inkcukancha zabantu ngokungekho semthethweni
Abeenkonzo zobuchwephesa kwezempilo batyholwa ngokugqithisa ngokungekho mthethweni iinkcukacha zezempilo zabantu nto leyo ibabeka kumabango ezolwaphulomthetho noluntu. Ukanti isebe lezempilo lithi lifumene igcebiso yezomthetho efumanise ukuba konke elikwenzileyo kuyahambisana nemigomo yezempilo kwakunye nomthetho. Ishishini lamagosa i-Hogan Lovell’s ifumanise ukuba kukho ukuqwabazwa komthetho welungelo nlabucala nemfihlo yabaguli kwakunye nokutyeshelwa komthetho ojongene nokukhutshwa kweencukacha.
i-Makhanda isacela malizo kwisimo sabo esibi saManzi
Kudingeka imali ezizigidi ezingamashumi amathathu eerandi ukunceda isixeko saseMakanda eyayisakuba yi-Grahamstowm. Umbutho wesisa i-Gift of the Givers ikhuphe isimemelelo kurhulumente,ababesakuba ngabafundi kwiyunivesithi yaseRhodes, abatyeleli kweli lizwe kwakunye nabemi belizwe ngokubanzi ukuba bafake inkxaso-mali khon’ukuze kubekho amanzi eMakhanda. Kwinyanga ephelileyo icala eliseMpuma leMakhanda ligqibe iveki kungekho manzi emva kokushokoxeka kwawo kwidama i-Glen Melville ethungelwa ngumlambo i-Fish River.